Transfer from Prievidza to Prague | Český Krumlov shuttle bus transfer
Transfer from Prievidza to Prague
Basic information about shuttle bus from Prievidza to Prague
Pick-up point: Anywhere in Prievidza (hotel, railwaystation, airport, etc.)
We provide a door-to-door service from Prievidza to Prague, which means that we will pick you up directly in your hotel (or any other place specified in the booking) in Prievidza and take you directly to the other hotel (or any other place) in Prague for no extra charge.
How to book the transfer from Prievidza to Prague
To book the transfer from Prievidza to Prague or just to check the availability please use the booking form, where you can fill in all the necessary information we need to know (such as number of passengers, date of your trip, preferred time of arrival etc.).
Private transfer from Prievidza to Prague - chauffeur service - private car or van
When you order a private transportation from Prievidza to Prague, we guarantee that no passengers other than from your group will be sharing the car with you.
Scenic transfer from Prievidza to Prague
On the way from Prievidza to Prague, it is possible to see for example: Trebon, castle of Hluboka nad Vltavou, Linz, Melk.
How to get from Prievidza to Prague - Shuttle bus transport between Prievidza and Prague
Easy and comfortable way of getting from Prievidza to Prague.
Faster than train from Prievidza to Prague or bus from Prievidza to Prague.
Cheaper than private taxi from Prievidza to Prague.